ပြင်ဦးလွင်သွား တောလား ... -
Posted on January 3, 2019 Author Myat Moe	Comment(0)
ပန်းပွဲတော်စနေပြီဆိုတော့ ပြင်ဦးလွင်ကို တစ်ခါတစ်ခေါက် သွားလည်ကြည့်ချင်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ မမိသင့်တဲ့ ဂျင်းတွေ မမိရလေအောင်…
ကဲ.. ပန်းပွဲတော် ရောက်ပြီးကြပြီလား ယောင်းတို့ရေ… ၁၅ ရက်နေ့ထိ ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ ကြားထဲမှာတော့ အချိန်ရသေးတယ်နော်.. ဆိုတော့ အက်မင် ပြင်ဦးလွင်ကို သွားခဲ့တုန်းက ကြုံခဲ့ရတဲ့ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်လေးတွေ ယောင်းတို့ကို ဝေမျှပေးမယ်နော်.. ဒီဆောင်းပါးလေးက ပြင်ဦးလွင် တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ယောင်းတို့အတွက် အနည်းနဲ့အများ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ရောက်ဖူးတဲ့ ယောင်းတွေအတွက်တော့ သိပြီးသားအချက်အချို့ ပါနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို အက်မင်လည်း အခုမှ ပထမဆုံးအခေါက်မို့ ကိုယ့်ယောင်းယောင်းတွေကို မျှဝေချင်ဇောနဲ့ ပြေးရေးရတာလေ 😀 ဒါဆို သွားဖို့ စီစဉ်တဲ့ဆီက ကြည့်ကြရအောင်…
အက်မင်ကတော့ ပြင်ဦးလွင် မသွားခင် အများကြီးပြင်ဆင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်က တစ်နှစ်နေလို့ခရီးတစ်ခါမထွက်ဖြစ်တဲ့ သူဆိုတော့ ခရီးထွက်ရတော့မယ်ဆိုပြီး ရင်ခုန်နေတာကိုး။ တည်းမယ့်နေရာတွေ လိုက်ကြည့်တယ်။ ရီဗျူးတွေလိုက်ဖတ်တယ်။ သွားသင့်တဲ့နေရာလေးတွေမှတ်ထားတယ်။ တစ်လလောက်အလိုတည်းက ကြိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်..
သွားမယ်ဆိုကြပြန်တော့လည်း ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံနဲ့ သွားကြမလဲ စဉ်းစားကြရင်း အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် Express ကားနဲ့ပဲ သွားကြမယ်ပေါ့.. ဆိုတော့ ကဲ ဘယ်ကားနဲ့သွားမလဲ၊ ရွေးစရာအများကြီးရှိတာကိုး။ ဒါလည်း ခရီးခဏခဏထွက်ဖြစ်တဲ့ အသိတွေဆီကအကြံယူပြီးပဲ Elite ကိုရွေးဖြစ်သွားပါတယ်။ Elite ကားလက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းကနေဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အချိန်ကုန် လူပန်းသက်သာတယ်လေ… ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခုံလည်းရွေးလို့ရတယ်၊ အသွားအပြန်ရက်ရွေးပြီး တစ်ခါတည်း လက်မှတ်ဖြတ်ထားလို့လည်းရတယ်။ တစ်ခုပဲ E-commerce လျှောက်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ Payment က MPU နဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့လေ။ ဝန်ဆောင်ခ သုံးရာတော့ ကျပါတယ်။ ကားထွက်ခါနီး ၁၅ မိနစ်လောက်အလိုမှ ကိုယ်လက်မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ screenshot လေးပြပြီး ထုတ်စီးလာတာပါ။ လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတဲ့ website တွေရှိပါတယ်။ ရှာရမခက်ပါဘူး။ နီးစပ်ရာလက်မှတ်ဆိုင်တွေကလည်း ဝယ်လို့ရတယ်နော်။
Elite လိုင်းက တကယ်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အက်မင်လို ကားမူးတတ်တဲ့သူတောင် ကားပေးမှာ ဖုန်းကိုအချိန်တစ်ခုထိ သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့… သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ ကားမောင်းတာ မကြမ်းဘူး၊ ကားမခါဘူး။ ဝန်ဆောင်မှုအဆင်ပြေတယ်။
အက်မင်သဘောအကျဆုံးက ကားပေါ်မှာ မြန်မာကားမဖွင့်တာပါ။ မြန်မာကားအများစုက ဆူညံတာကြောင့် ညဘက်သွားတဲ့ခရီးမှာ ဖွင့်ထားရင် အဆင်မပြေပါဘူး။ Elite ကတော့ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းစွာနဲ့ပဲ အသွားရောအပြန်ရော မြန်မာကားမဖွင့်ပါဘူး။ ယုတ်စွအဆုံး သီချင်းတောင်မဖွင့်ပါဘူး။ ကားစစထွက်ချင်း တရားခွေလောက်ပဲဖွင့်ပါတယ်။ ဒါလည်း ခဏပါ။ ခဏကြာတော့ အိပ်ရအဆင်ပြေအောင် ပိတ်ပေးပါတယ်။
အက်မင်က ခရီးသိပ်မသွားတဲ့သူဆိုတော့ ဘယ်ကားလိုင်းက ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးတွေ အကျွမ်းတဝင်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေး အိပ်ပြီးစီးချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကားမမူးဘဲ အဆင်ပြေပြေသွားချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် Elite ကို ရွေးဖို့ recommend လုပ် (အကြံပြု)ပါတယ်။ အသွားရော အပြန်ရော အဆင်ပြေခဲ့လို့ပါ။
ချယ်ရီတွေ လှတယ်ဟုတ် (လူပုံတော့ သည်းခံပါ :3 )
တည်းမယ့်နေရာရှာဆိုတော့ အက်မင်က ဘန်ဂလိုလေးတွေကို မျက်စိကျနေတော့ ဘန်ဂလိုပါတဲ့ ဟိုတယ်တွေပဲ လိုက်ကြည့်ထားတာ။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပဲ ဒေသခံအသိတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ဘန်ဂလိုကို ဘွတ်ကင်မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ သူတို့အများစုက မြို့ပြင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သွားလာဖို့ စားသောက်ဖို့ ခက်ခဲတယ်တဲ့လေ။ (ယောင်းတို့သွားဖြစ်ရင်လည်း မြို့ထဲက ဟိုတယ်တွေကိုပဲ စဉ်းစားနော်။ တကယ်သွားဖို့လာဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ) ဒါနဲ့ပဲ မြို့ထဲက Royal Jasmine Hotel မှာပဲ ဘွတ်ကင်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်..
Related Article >>> ခရီးသွားတဲ့အခါ အတွင်းပစ္စည်းတွေကို သေချာထုပ်သိမ်းကြမယ်
ပြီးတော့ ပြင်ဦးလွင်မှာ လည်ဖို့ကား.. ဒါလည်း သိပ်ပူစရာမလိုပါဘူး…. အက်မင်တို့ တည်းတဲ့ဟိုတယ်ကို ကားစီစဉ်ခိုင်းလို့ရတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဈေးမေးကြည့်တော့ တော်တော်လေးမဆိုးတဲ့ဈေးပါ။ ကားမောင်းပြီး လိုက်ပို့ပေးမယ့်သူရော ဆီရော အပြီးအစီးကိုမှ တစ်ရက်ကို ၃၅၀၀၀ နဲ့ ၄၀၀၀၀ ကြားလောက်ရှိတယ်တဲ့။ အက်မင်တို့ တခြား အပြင်မှာ စုံစမ်းတုန်းက တစ်ရက် ၅၀၀၀၀ ကို ဆီကိုယ့်ဟာကိုယ် ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ ပြောရမယ်ဆို ဟိုတယ်ကို ခေါ်ခိုင်းတာက ပိုသက်သာတဲ့အတွက် ကားကိစ္စအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
အက်မင်တို့ကားက ည ၈ နာရီထွက်တာကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ကို မနက် ၆ နာရီကျော်ကျော်လောက် ရောက်သွားပါတယ်။ ရောက်တဲ့အချိန် အပူချိန် ၁၄ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်ပါ။ ပါးစပ်ထဲကအငွေ့တောင်ထွက်ပါတယ်။ (သွားမယ့် ယောင်းယောင်းတွေ အနွေးထည် ထူထူ ယူသွားသင့်)
ဆင်းတဲ့အခါ ပြင်ဦးလွင် ကားကြီးကွင်းထိ လိုက်စီးသွားစရာမလိုပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အနီးဆုံးဘယ်ဂိတ်မှာ ဆင်းရမလဲမေးလို့ရပါတယ်။ အက်မင်တို့တည်းတဲ့ Royal Jasmine က ဂိတ်မှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လာကြိုပေးပါတယ်။
ဒါဆို ပြင်ဦးလွင်ကို ဆက်လည်ရအောင်…
ပထမဆုံးသွားဖြစ်ခဲ့တာ ဓာတ်တော်ချိုင့်ပါ။ ဒီနေရာမှာ အက်မင်အကြီးကြီး သတိပေးချင်ပါတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ပိုက်ဆံမကုန်ချင်ရင်၊ အပင်ပန်းမခံနိုင်ရင် ဓာတ်တော်ချိုင့်ထဲ ဆင်းမယ့်စိတ်ကူးလေး ဘေးချိတ်လိုက်ပါ။ အပေါ်က နှစ်ချက်ထဲက တစ်ချက်ချက်နဲ့ ငြိရင် ဘယ်သူဆွယ်ဆွယ် မဆင်းသွားဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တော်တော်လေး (အရမ်း) ကို မတ်တဲ့ချောက်ပါ။ မတ်လွန်းလို့ အရမ်းထိန်းရတာကြောင့် အဆင်းတောင်အကြောတွေ တောင့်ပါတယ်။ ခလုတ်တိုက်လို့ လိမ့်သွားရင်တော့ တော်တော်အီဆောင့်နေမယ့်ချောက်ပါ။ တော်တော်နဲ့ရပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခဲလမ်းဆိုတော့ ခလုတ်တိုက်ဖို့လည်း လွယ်ပါတယ်။ ရောက်မှတော့ မထူးဘူးဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေဘူးထည့်သွားပါ။ အဆင်းမှာ အအေးရောင်းတဲ့ သူတွေက တွဲပေးရမလားဆိုပြီး လာကပ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေကိုပါ။ သူတို့အကူအညီမယူပါနဲ့။ ဂျင်းအကြီးစားပါ။ ပြုတ်ကျမှာကြောက်ရင် တောင်ဝှေးဆောင်သွားပါ။ ကမ်းပါးက ဆိုင်တွေမှာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အကူအညီယူမိရင်တော့ အောက်ရောက်တဲ့အခါ ၅၀၀ တန်အအေးကို ၁၅၀၀ နဲ့ ဝယ်သောက်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒါတင်မကသေးပါဘူး သူတို့ကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေနဲ့ပါ ချိတ်ထားပါတယ်။ သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို အတက်မှာဆိုင်ကယ်ငှားစီးအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆွယ်တော့တာပါပဲ။ အောက်ရောက်သွားတဲ့အခါ ရေတံခွန်ကို အနီးကပ်မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်း၊ ရေမွှားတွေ ကိုယ့်ပေါ်လာစင်ပြီး အမောပြေသလောက် ပြန်တက်တဲ့အခါ နောင်တရမှာပါ။ တစ်ခါသွား အလှမ်းနှစ်ဆယ်ထက်ပိုမသွားနိုင်ပါဘူး။ မောပြီးဟိုက်လာပါတယ်။ ပိုဆိုးလာတာ ခုနအလာတုန်းက အအေးသည်တစ်အုပ်ရယ် ဆိုင်ကယ်တစ်အုပ်ရယ်က ကိုယ့်နောက်ကတောက်လျှောက်ပါလာတာပါပဲ။ ကိုယ်နားရင် သူတို့က ဆိုင်ကယ်ရပ်စောင့်။ ကိုယ်သွားရင် နောက်ကပါလာနဲ့ အရမ်းစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပါတယ်။ အက်မင်တို့ဆို နှစ်ယောက်တည်းကို နောက်ကလိုက်လာတဲ့အုပ်က ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်။
ဘယ်လောက်မတ်လဲဆိုရင် ကိုယ့်ရှေ့တင်သန်သန်မာမာလူကြီးတွေ ဆက်မတက်နိုင်တော့လို့ ဆိုင်ကယ်ငှားသွားတာကို တွေ့နေရတာပါ။ ဈေးကလည်း သူတို့ပါးစပ်ထဲတင်ရှိပါတယ်။ ပွဲတော်နေ့တွေဆို ၁၅၀၀၀ လောက်ထိ တောင်းတယ်လို့ ပြန်သိရတယ်။ ကိုယ်ကတော့ မတန်တဆဆိုတာသိနေတာမို့ မပေးချင်လို့ကို အံကြိတ်ပြီး တက်လာတာပါ။ အဆင်း ဆယ်မိနစ် အတက် တစ်နာရီခွဲပါ။ ပထမနေ့တော့ ဓာတ်တော်ချိုင့်တင် တော်တော်ပန်းသွားတာမို့ နောက်နေရာတွေတောင် သေချာမသွားနိုင်လိုက်ပါဘူး။
အခုချိန်သွားမယ်ဆိုရင် အဲ့မှာစတော်ဘယ်ရီဝယ်မသောက်ပါနဲ့။ အခုက စတော်ဘယ်ရီရာသီမဟုတ်တဲ့အတွက် Import အသီးတွေကိုပဲ ဖျော်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဈေးလည်း ပိုကြီးပါတယ်။ ခြံထဲမှာ ယုန်လေးတွေ၊ ဒေါင်းတွေ၊ မြည်းပုလေးတွေ သူ့နေရာနဲ့သူ ခြံလေးခတ်ထားပါတယ်။ ကလေးတွေကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဝင်ကြေး Free ပါ။
Related Article >>> ခရီးသွား အေဂျင်စီနဲ့ ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလို အချက်လေးတွေတော့ သိထားဖို့ လိုမယ်ထင်
နောက်တစ်ခုက The View ပါ။
ဓာတ်တော်ချိုင့်ရဲ့ ရှုခင်းကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ရမယ့်နေရာပါပဲ။ အဲ့ကိုရောက်မှ ပိုနောင်တရပါတယ်။ အပင်ပန်းခံစရာမလိုဘဲ အဲ့နားကနေ အေးအေးလူလူ မြင်ရတဲ့ဟာကို အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်သွားပါပြီပေါ့။ ပြီးတော့ ဘဝင်လည်းမြင့်သွားပါတယ်။ ငါဒီလောက်အမြင့်ကြီးကို ရောက်အောင် ပြန်တက်လာနိုင်တာပဲပေါ့။ ဝင်ကြေးတစ်ယောက်တစ်ထောင်ပါ။ Pepssi တို့ Sunkist တို့လို သံဘူးအအေး တစ်ယောက်တစ်ဘူး ပြန်တိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေရာက Governer House ပါ။
အဆောက်အဦးထဲ ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝင်ကြေးတစ်ယောက် လေးထောင်ပါ။ ဝင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။အသက်ဝင်လွန်းလို့ ကြက်သီးထရလောက်အောင် လက်ရာမြောက်တဲ့ အရုပ်တွေရှိပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်ကလည်း တကယ်ကို ၁၈-၁၉ ရာစုလောက်ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရမှာပါ။ အထဲရောက်ရင် ခြံထွက်ကော်ဖီတိုက်ပါတယ်။ ကော်ဖီမကြိုက်ရင် အအေးတိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Mico Hill ကို သွားပါ။
အကျယ်ကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အရမ်းလှတဲ့ Spotတွေရှိတဲ့ နေရာလေးပါ။ ဝင်ကြေးတစ်ယောက်တစ်ထောင်ပါ။ ရေဘူးအသေးလေး ပြန်ထည့်ပေးပါတယ်။
BE Fall၊ မဟာအံ့ထူးကန်သာ၊ ကန်တော်ကြီး၊ ပိတ်ချင်းမြောင်တို့ကတော့ သွားကိုသွားဖြစ်ကြမယ့် နေရာတွေဆိုတော့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး။ အဲ ပြင်ဦးလွင်ရောက်ပြီးမှ ခြံထွက်စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည်သောက်ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ BE Fall မှာ သောက်ပါ။ ဒီဇင်ဘာခြံထက် သက်သာသလို ခြံထွက်စစ်ပါတယ်။ အသီးတော့မရောင်းသေးပါဘူး။ ဒီအချိန်ရှားပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အသီးဝိုင်စစ်စစ်တွေလည်း ရပါတယ်။ ဈေးကတော့ ၆၀၀၀-၈၀၀၀ လောက်ပါ။
နောက်ထပ်သွားသင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုက ထူးလိမ္မော်ခြံပါ။
BE fall ကနေ တော်တော်ဆက်ဝင်ရပါတယ်။ ဝင်ကြေး ၂၀၀၀ ပါ။ ခြံထဲရောက်သွားရင် တုတ်တုတ်လေးနဲ့ လိမ္မော်ခင်းထဲလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ဝါးခမောက်နဲ့ ပလိုင်းလေးတွေပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိမ္မော်သီးခူးလို့ရပါသေးတယ်။ လိမ္မော်သီးက တစ်ကီလိုနှစ်ထောင်ပါ။ ခူးသလောက် ချိန်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ လိမ္မော်ရည်စစ်စစ်တစ်ခွက် လက်ဆောင်ပြန်တိုက်ပါတယ်။
လမ်းမကြီးက ကားအသွားအလာနည်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပေါ့။ ကားလမ်းဘေးမှာလည်း သစ်တောဆိုတော့ အေးအေးလူလူနဲ့ ရိုက်နိုင်ရင် ပုံကောင်းလေးတွေ ရမှာပါ။
အချိန်သိပ်မကုန်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Cozy World ကို မသွားပါနဲ့ ယောင်းရေ..
အလှဆင်ထားတဲ့ အရုပ်အနည်းအကျဉ်းအပြင် ဘာမှမရှိလို့ပါ။ ဝင်ကြေးတစ်ထောင်ပါ။ ဒီမှာတော့ လက်ဆောင်ဘာမှပြန်မပေးပါဘူး။
နောက်ထပ်သတိထားစရာတစ်ခုက လည်ပတ်တော့မယ်ဆိုရင် မနက် ၉-၁၀ လောက်ထွက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ နေ့တာတို၊ သစ်ပင်တွေများ၊ အမှောင်မြန်၊ အအေးပိုလာတဲ့အတွက် ညနေပိုင်းရောက်လေ လည်လို့မကောင်းတော့လေပါ။ လည်ပတ်ရမယ့်နေရာတွေကလည်း ညနေ ငါးခွဲလောက်ဆိုပိတ်တတ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ သတိထပ်ပေးချင်တာလေးကတော့ အပင်ပန်းမခံနိုင်ရင် ဓာတ်တော်ချိုင့်မသွားကြဖို့ပါ။ အက်မင်ဆို ပင်ပန်းပြီးဖျားလို့ ပြင်ဦးလွင်မှာတင် ဆေးဆန်းသွားပြ ဆေးပါသွင်းယူလိုက်ရပါတယ်။ ခြေထောက်ကိုက်တဲ့ ဒဏ်ကိုလည်းမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျအောင် ခံလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့ သွားမယ်လို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ကန်တော်ကြီးတောင် နေမကောင်းလို့ မရောက်သွားလိုက်ပါဘူး။ ပြင်ဦးလွင်ရောက်ပြီး ကန်တော်ကြီးမရောက်ဘဲ ဆေးခန်းရောက်သွားတဲ့ မတ်မတ်ပါနော် -_- နောက်ဆုံးနေ့ဆေးခန်းကပြန်လာ ဟိုတယ်မှာခဏအနားယူပြီး ည ၇ နာရီကားနဲ့ ရန်ကုန်ကိုပြန်ထွက်ပါတယ်။ ဒီကို မနက် ၅ နာရီလောက်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
အက်မင်ကတော့ ကြုံခဲ့သမျှ ဂျင်းတွေရော အစစ်အမှန်တွေကိုရော မျှဝေပြီးသွားပါပြီ။ ရောက်အောင်သွားပြီး ဂျင်းကြည့်ရှောင်ဖို့ကတော့ ယောင်းတို့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီနော်။ ကဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဝယ်ထားသမျှ အနွေးထည်တွေနဲ့ ပန်းပေါင်းစုံကြားမှာ ရှိုးထုတ်ဖို့ မြန်မြန်စီစဉ်လိုက်တော့လေ။
ဓာတ်ပုံများ အသုံးပြုခွင့်ပေးပါသော Ko Tin Maung အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ပနျးပှဲတျောစနပွေီဆိုတော့ ပွငျဦးလှငျကို တဈခါတဈခေါကျ သှားလညျကွညျ့ခငျြတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့ မမိသငျ့တဲ့ ဂငျြးတှေ မမိရလအေောငျ…
ကဲ.. ပနျးပှဲတျော ရောကျပွီးကွပွီလား ယောငျးတို့ရေ… ၁၅ ရကျနထေိ့ ရှိသေးတယျဆိုတော့ ကွားထဲမှာတော့ အခြိနျရသေးတယျနျော.. ဆိုတော့ အကျမငျ ပွငျဦးလှငျကို သှားခဲ့တုနျးက ကွုံခဲ့ရတဲ့ ရှောငျရနျ၊ ဆောငျရနျလေးတှေ ယောငျးတို့ကို ဝမြှေပေးမယျနျော.. ဒီဆောငျးပါးလေးက ပွငျဦးလှငျ တဈခါမှ မရောကျဖူးတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ အနညျးနဲ့အမြား အထောကျအကူဖွဈနိုငျပမေဲ့ ရောကျဖူးတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျတော့ သိပွီးသားအခကျြအခြို့ ပါနိုငျပါတယျ။ ဘာလို့ဆို အကျမငျလညျး အခုမှ ပထမဆုံးအခေါကျမို့ ကိုယျ့ယောငျးယောငျးတှကေို မြှဝခေငျြဇောနဲ့ ပွေးရေးရတာလေ 😀 ဒါဆို သှားဖို့ စီစဉျတဲ့ဆီက ကွညျ့ကွရအောငျ…
အကျမငျကတော့ ပွငျဦးလှငျ မသှားခငျ အမြားကွီးပွငျဆငျပါတယျ။ ဘာလို့ဆို ကိုယျက တဈနှဈနလေို့ခရီးတဈခါမထှကျဖွဈတဲ့ သူဆိုတော့ ခရီးထှကျရတော့မယျဆိုပွီး ရငျခုနျနတောကိုး။ တညျးမယျ့နရောတှေ လိုကျကွညျ့တယျ။ ရီဗြူးတှလေိုကျဖတျတယျ။ သှားသငျ့တဲ့နရောလေးတှမှေတျထားတယျ။ တဈလလောကျအလိုတညျးက ကွိုပွငျဆငျထားတယျပေါ့နျော..
သှားမယျဆိုကွပွနျတော့လညျး ဘယျနညျး ဘယျပုံနဲ့ သှားကွမလဲ စဉျးစားကွရငျး အဆငျအပွဆေုံးဖွဈနိုငျမယျ့ Express ကားနဲ့ပဲ သှားကွမယျပေါ့.. ဆိုတော့ ကဲ ဘယျကားနဲ့သှားမလဲ၊ ရှေးစရာအမြားကွီးရှိတာကိုး။ ဒါလညျး ခရီးခဏခဏထှကျဖွဈတဲ့ အသိတှဆေီကအကွံယူပွီးပဲ Elite ကိုရှေးဖွဈသှားပါတယျ။ Elite ကားလကျမှတျကို အှနျလိုငျးကနဖွေတျလို့ရတယျဆိုတော့ အခြိနျကုနျ လူပနျးသကျသာတယျလေ… ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ခုံလညျးရှေးလို့ရတယျ၊ အသှားအပွနျရကျရှေးပွီး တဈခါတညျး လကျမှတျဖွတျထားလို့လညျးရတယျ။ တဈခုပဲ E-commerce လြှောကျဖို့တော့လိုလိမျ့မယျ။ Payment က MPU နဲ့ဖွတျတာဆိုတော့လေ။ ဝနျဆောငျခ သုံးရာတော့ ကပြါတယျ။ ကားထှကျခါနီး ၁၅ မိနဈလောကျအလိုမှ ကိုယျလကျမှတျဖွတျထားတဲ့ screenshot လေးပွပွီး ထုတျစီးလာတာပါ။ လကျမှတျဝယျလို့ရတဲ့ website တှရှေိပါတယျ။ ရှာရမခကျပါဘူး။ နီးစပျရာလကျမှတျဆိုငျတှကေလညျး ဝယျလို့ရတယျနျော။
Elite လိုငျးက တကယျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ အကျမငျလို ကားမူးတတျတဲ့သူတောငျ ကားပေးမှာ ဖုနျးကိုအခြိနျတဈခုထိ သုံးနိုငျတယျဆိုတော့… သကျတောငျ့သကျသာရှိတယျ။ ကားမောငျးတာ မကွမျးဘူး၊ ကားမခါဘူး။ ဝနျဆောငျမှုအဆငျပွတေယျ။
အကျမငျသဘောအကဆြုံးက ကားပျေါမှာ မွနျမာကားမဖှငျ့တာပါ။ မွနျမာကားအမြားစုက ဆူညံတာကွောငျ့ ညဘကျသှားတဲ့ခရီးမှာ ဖှငျ့ထားရငျ အဆငျမပွပေါဘူး။ Elite ကတော့ စိတျကနြေပျစရာကောငျးစှာနဲ့ပဲ အသှားရောအပွနျရော မွနျမာကားမဖှငျ့ပါဘူး။ ယုတျစှအဆုံး သီခငျြးတောငျမဖှငျ့ပါဘူး။ ကားစစထှကျခငျြး တရားခှလေောကျပဲဖှငျ့ပါတယျ။ ဒါလညျး ခဏပါ။ ခဏကွာတော့ အိပျရအဆငျပွအေောငျ ပိတျပေးပါတယျ။
အကျမငျက ခရီးသိပျမသှားတဲ့သူဆိုတော့ ဘယျကားလိုငျးက ဘယျလိုဆိုတာမြိုးတှေ အကြှမျးတဝငျမရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အတှအေ့ကွုံအရဆိုရငျ အေးအေးဆေးဆေး အိပျပွီးစီးခငျြရငျဖွဈဖွဈ၊ သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ ကားမမူးဘဲ အဆငျပွပွေသှေားခငျြရငျဖွဈဖွဈ Elite ကို ရှေးဖို့ recommend လုပျ (အကွံပွု)ပါတယျ။ အသှားရော အပွနျရော အဆငျပွခေဲ့လို့ပါ။
ခယျြရီတှေ လှတယျဟုတျ (လူပုံတော့ သညျးခံပါ :3 )
တညျးမယျ့နရောရှာဆိုတော့ အကျမငျက ဘနျဂလိုလေးတှကေို မကျြစိကနြတေော့ ဘနျဂလိုပါတဲ့ ဟိုတယျတှပေဲ လိုကျကွညျ့ထားတာ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးထောကျမစှာနဲ့ပဲ ဒသေခံအသိတဈယောကျရဲ့ အကွံပေးခကျြအရ ဘနျဂလိုကို ဘှတျကငျမတငျဖွဈလိုကျဘူး။ သူတို့အမြားစုက မွို့ပွငျမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ သှားလာဖို့ စားသောကျဖို့ ခကျခဲတယျတဲ့လေ။ (ယောငျးတို့သှားဖွဈရငျလညျး မွို့ထဲက ဟိုတယျတှကေိုပဲ စဉျးစားနျော။ တကယျသှားဖို့လာဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ ) ဒါနဲ့ပဲ မွို့ထဲက Royal Jasmine Hotel မှာပဲ ဘှတျကငျတငျလိုကျတယျပေါ့နျော..
ပွီးတော့ ပွငျဦးလှငျမှာ လညျဖို့ကား.. ဒါလညျး သိပျပူစရာမလိုပါဘူး…. အကျမငျတို့ တညျးတဲ့ဟိုတယျကို ကားစီစဉျခိုငျးလို့ရတယျတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဈေးမေးကွညျ့တော့ တျောတျောလေးမဆိုးတဲ့ဈေးပါ။ ကားမောငျးပွီး လိုကျပို့ပေးမယျ့သူရော ဆီရော အပွီးအစီးကိုမှ တဈရကျကို ၃၅၀၀၀ နဲ့ ၄၀၀၀၀ ကွားလောကျရှိတယျတဲ့။ အကျမငျတို့ တခွား အပွငျမှာ စုံစမျးတုနျးက တဈရကျ ၅၀၀၀၀ ကို ဆီကိုယျ့ဟာကိုယျ ထညျ့ရမယျဆိုတော့ ပွောရမယျဆို ဟိုတယျကို ချေါခိုငျးတာက ပိုသကျသာတဲ့အတှကျ ကားကိစ်စအဆငျပွသှေားပါတယျ။
အကျမငျတို့ကားက ည ၈ နာရီထှကျတာကွောငျ့ ပွငျဦးလှငျကို မနကျ ၆ နာရီကြျောကြျောလောကျ ရောကျသှားပါတယျ။ ရောကျတဲ့အခြိနျ အပူခြိနျ ၁၄ဒီဂရီဆဲလျစီးယပျဈပါ။ ပါးစပျထဲကအငှတေ့ောငျထှကျပါတယျ။ (သှားမယျ့ ယောငျးယောငျးတှေ အနှေးထညျ ထူထူ ယူသှားသငျ့)
ဆငျးတဲ့အခါ ပွငျဦးလှငျ ကားကွီးကှငျးထိ လိုကျစီးသှားစရာမလိုပါဘူး။ သကျဆိုငျရာ ဟိုတယျကို ဖုနျးဆကျပွီး အနီးဆုံးဘယျဂိတျမှာ ဆငျးရမလဲမေးလို့ရပါတယျ။ အကျမငျတို့တညျးတဲ့ Royal Jasmine က ဂိတျမှာ ဆိုငျကယျနဲ့ လာကွိုပေးပါတယျ။
ဒါဆို ပွငျဦးလှငျကို ဆကျလညျရအောငျ…
ပထမဆုံးသှားဖွဈခဲ့တာ ဓာတျတျောခြိုငျ့ပါ။ ဒီနရောမှာ အကျမငျအကွီးကွီး သတိပေးခငျြပါတယျ။ မလိုအပျဘဲ ပိုကျဆံမကုနျခငျြရငျ၊ အပငျပနျးမခံနိုငျရငျ ဓာတျတျောခြိုငျ့ထဲ ဆငျးမယျ့စိတျကူးလေး ဘေးခြိတျလိုကျပါ။ အပျေါက နှဈခကျြထဲက တဈခကျြခကျြနဲ့ ငွိရငျ ဘယျသူဆှယျဆှယျ မဆငျးသှားဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တျောတျောလေး (အရမျး) ကို မတျတဲ့ခြောကျပါ။ မတျလှနျးလို့ အရမျးထိနျးရတာကွောငျ့ အဆငျးတောငျအကွောတှေ တောငျ့ပါတယျ။ ခလုတျတိုကျလို့ လိမျ့သှားရငျတော့ တျောတျောအီဆောငျ့နမေယျ့ခြောကျပါ။ တျောတျောနဲ့ရပျမှာမဟုတျပါဘူး။ ခဲလမျးဆိုတော့ ခလုတျတိုကျဖို့လညျး လှယျပါတယျ။ ရောကျမှတော့ မထူးဘူးဆငျးလိုကျမယျဆိုရငျတော့ ရဘေူးထညျ့သှားပါ။ အဆငျးမှာ အအေးရောငျးတဲ့ သူတှကေ တှဲပေးရမလားဆိုပွီး လာကပျပါလိမျ့မယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိနျးကလေးတှကေိုပါ။ သူတို့အကူအညီမယူပါနဲ့။ ဂငျြးအကွီးစားပါ။ ပွုတျကမြှာကွောကျရငျ တောငျဝှေးဆောငျသှားပါ။ ကမျးပါးက ဆိုငျတှမှော ရှိပါလိမျ့မယျ။ သူတို့အကူအညီယူမိရငျတော့ အောကျရောကျတဲ့အခါ ၅၀၀ တနျအအေးကို ၁၅၀၀ နဲ့ ဝယျသောကျရပါလိမျ့မယျ။
အဲ့ဒါတငျမကသေးပါဘူး သူတို့ကဆိုငျကယျကယျရီသမားတှနေဲ့ပါ ခြိတျထားပါတယျ။ သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့ ဧညျ့သညျတှကေို အတကျမှာဆိုငျကယျငှားစီးအောငျ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ဆှယျတော့တာပါပဲ။ အောကျရောကျသှားတဲ့အခါ ရတေံခှနျကို အနီးကပျမွငျရတဲ့ မွငျကှငျး၊ ရမှေားတှေ ကိုယျ့ပျေါလာစငျပွီး အမောပွသေလောကျ ပွနျတကျတဲ့အခါ နောငျတရမှာပါ။ တဈခါသှား အလှမျးနှဈဆယျထကျပိုမသှားနိုငျပါဘူး။ မောပွီးဟိုကျလာပါတယျ။ ပိုဆိုးလာတာ ခုနအလာတုနျးက အအေးသညျတဈအုပျရယျ ဆိုငျကယျတဈအုပျရယျက ကိုယျ့နောကျကတောကျလြှောကျပါလာတာပါပဲ။ ကိုယျနားရငျ သူတို့က ဆိုငျကယျရပျစောငျ့။ ကိုယျသှားရငျ နောကျကပါလာနဲ့ အရမျးစိတျရှုပျစရာကောငျးပါတယျ။ အကျမငျတို့ဆို နှဈယောကျတညျးကို နောကျကလိုကျလာတဲ့အုပျက ဆယျယောကျလောကျရှိတယျ။
ဘယျလောကျမတျလဲဆိုရငျ ကိုယျ့ရှတေ့ငျသနျသနျမာမာလူကွီးတှေ ဆကျမတကျနိုငျတော့လို့ ဆိုငျကယျငှားသှားတာကို တှနေ့ရေတာပါ။ ဈေးကလညျး သူတို့ပါးစပျထဲတငျရှိပါတယျ။ ပှဲတျောနတှေ့ဆေို ၁၅၀၀၀ လောကျထိ တောငျးတယျလို့ ပွနျသိရတယျ။ ကိုယျကတော့ မတနျတဆဆိုတာသိနတောမို့ မပေးခငျြလို့ကို အံကွိတျပွီး တကျလာတာပါ။ အဆငျး ဆယျမိနဈ အတကျ တဈနာရီခှဲပါ။ ပထမနတေ့ော့ ဓာတျတျောခြိုငျ့တငျ တျောတျောပနျးသှားတာမို့ နောကျနရောတှတေောငျ သခြောမသှားနိုငျလိုကျပါဘူး။
အခုခြိနျသှားမယျဆိုရငျ အဲ့မှာစတျောဘယျရီဝယျမသောကျပါနဲ့။ အခုက စတျောဘယျရီရာသီမဟုတျတဲ့အတှကျ Import အသီးတှကေိုပဲ ဖြျောပေးပါလိမျ့မယျ။ ဈေးလညျး ပိုကွီးပါတယျ။ ခွံထဲမှာ ယုနျလေးတှေ၊ ဒေါငျးတှေ၊ မွညျးပုလေးတှေ သူ့နရောနဲ့သူ ခွံလေးခတျထားပါတယျ။ ကလေးတှကေို သှားကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ဝငျကွေး Free ပါ။
Related Article >>> ခရီးသှား အဂေငျြစီနဲ့ ခရီးသှားတော့မယျဆိုရငျ ဒီလို အခကျြလေးတှတေော့ သိထားဖို့ လိုမယျထငျ
နောကျတဈခုက The View ပါ။
ဓာတျတျောခြိုငျ့ရဲ့ ရှုခငျးကို ကှငျးကှငျးကှကျကှကျမွငျရမယျ့နရောပါပဲ။ အဲ့ကိုရောကျမှ ပိုနောငျတရပါတယျ။ အပငျပနျးခံစရာမလိုဘဲ အဲ့နားကနေ အေးအေးလူလူ မွငျရတဲ့ဟာကို အခြိနျကုနျလူပနျးဖွဈသှားပါပွီပေါ့။ ပွီးတော့ ဘဝငျလညျးမွငျ့သှားပါတယျ။ ငါဒီလောကျအမွငျ့ကွီးကို ရောကျအောငျ ပွနျတကျလာနိုငျတာပဲပေါ့။ ဝငျကွေးတဈယောကျတဈထောငျပါ။ Pepssi တို့ Sunkist တို့လို သံဘူးအအေး တဈယောကျတဈဘူး ပွနျတိုကျပါတယျ။
နောကျတဈနရောက Governer House ပါ။
အဆောကျအဦးထဲ ဝငျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဝငျကွေးတဈယောကျ လေးထောငျပါ။ ဝငျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။အသကျဝငျလှနျးလို့ ကွကျသီးထရလောကျအောငျ လကျရာမွောကျတဲ့ အရုပျတှရှေိပါတယျ။ အတှငျးပိုငျးအပွငျအဆငျကလညျး တကယျကို ၁၈-၁၉ ရာစုလောကျကို ပွနျရောကျသှားသလို ခံစားရမှာပါ။ အထဲရောကျရငျ ခွံထှကျကျောဖီတိုကျပါတယျ။ ကျောဖီမကွိုကျရငျ အအေးတိုကျပါတယျ။
ပွီးတော့ Mico Hill ကို သှားပါ။
အကယျြကွီး မဟုတျပမေယျ့ ဓါတျပုံရိုကျဖို့ အရမျးလှတဲ့ Spotတှရှေိတဲ့ နရောလေးပါ။ ဝငျကွေးတဈယောကျတဈထောငျပါ။ ရဘေူးအသေးလေး ပွနျထညျ့ပေးပါတယျ။
BE Fall၊ မဟာအံ့ထူးကနျသာ၊ ကနျတျောကွီး၊ ပိတျခငျြးမွောငျတို့ကတော့ သှားကိုသှားဖွဈကွမယျ့ နရောတှဆေိုတော့ ထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပါဘူး။ အဲ ပွငျဦးလှငျရောကျပွီးမှ ခွံထှကျစတျောဘယျရီ ဖြျောရညျသောကျရမှ ဖွဈမယျဆိုရငျတော့ BE Fall မှာ သောကျပါ။ ဒီဇငျဘာခွံထကျ သကျသာသလို ခွံထှကျစဈပါတယျ။ အသီးတော့မရောငျးသေးပါဘူး။ ဒီအခြိနျရှားပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ အသီးဝိုငျစဈစဈတှလေညျး ရပါတယျ။ ဈေးကတော့ ၆၀၀၀-၈၀၀၀ လောကျပါ။
နောကျထပျသှားသငျ့တဲ့ နရောတဈခုက ထူးလိမ်မျောခွံပါ။
BE fall ကနေ တျောတျောဆကျဝငျရပါတယျ။ ဝငျကွေး ၂၀၀၀ ပါ။ ခွံထဲရောကျသှားရငျ တုတျတုတျလေးနဲ့ လိမ်မျောခငျးထဲလိုကျပို့ပေးပါတယျ။ ဝါးခမောကျနဲ့ ပလိုငျးလေးတှပေေးပွီး ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လိမ်မျောသီးခူးလို့ရပါသေးတယျ။ လိမ်မျောသီးက တဈကီလိုနှဈထောငျပါ။ ခူးသလောကျ ခြိနျပေးပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ လိမ်မျောရညျစဈစဈတဈခှကျ လကျဆောငျပွနျတိုကျပါတယျ။
လမျးမကွီးက ကားအသှားအလာနညျးလို့ ဓာတျပုံရိုကျလို့ ကောငျးတဲ့ နရောလေးပေါ့။ ကားလမျးဘေးမှာလညျး သဈတောဆိုတော့ အေးအေးလူလူနဲ့ ရိုကျနိုငျရငျ ပုံကောငျးလေးတှေ ရမှာပါ။
အခြိနျသိပျမကုနျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ Cozy World ကို မသှားပါနဲ့ ယောငျးရေ..
အလှဆငျထားတဲ့ အရုပျအနညျးအကဉျြးအပွငျ ဘာမှမရှိလို့ပါ။ ဝငျကွေးတဈထောငျပါ။ ဒီမှာတော့ လကျဆောငျဘာမှပွနျမပေးပါဘူး။
နောကျထပျသတိထားစရာတဈခုက လညျပတျတော့မယျဆိုရငျ မနကျ ၉-၁၀ လောကျထှကျနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ နတေ့ာတို၊ သဈပငျတှမြေား၊ အမှောငျမွနျ၊ အအေးပိုလာတဲ့အတှကျ ညနပေိုငျးရောကျလေ လညျလို့မကောငျးတော့လပေါ။ လညျပတျရမယျ့နရောတှကေလညျး ညနေ ငါးခှဲလောကျဆိုပိတျတတျပါတယျ။
နောကျဆုံးပိတျအနနေဲ့ သတိထပျပေးခငျြတာလေးကတော့ အပငျပနျးမခံနိုငျရငျ ဓာတျတျောခြိုငျ့မသှားကွဖို့ပါ။ အကျမငျဆို ပငျပနျးပွီးဖြားလို့ ပွငျဦးလှငျမှာတငျ ဆေးဆနျးသှားပွ ဆေးပါသှငျးယူလိုကျရပါတယျ။ ခွထေောကျကိုကျတဲ့ ဒဏျကိုလညျးမကျြရညျပေါကျပေါကျကအြောငျ ခံလိုကျရပါတယျ။ နောကျဆုံးနေ့ သှားမယျလို့ စီစဉျထားတဲ့ ကနျတျောကွီးတောငျ နမေကောငျးလို့ မရောကျသှားလိုကျပါဘူး။ ပွငျဦးလှငျရောကျပွီး ကနျတျောကွီးမရောကျဘဲ ဆေးခနျးရောကျသှားတဲ့ မတျမတျပါနျော -_- နောကျဆုံးနဆေ့ေးခနျးကပွနျလာ ဟိုတယျမှာခဏအနားယူပွီး ည ၇ နာရီကားနဲ့ ရနျကုနျကိုပွနျထှကျပါတယျ။ ဒီကို မနကျ ၅ နာရီလောကျပွနျရောကျလာပါတယျ။
အကျမငျကတော့ ကွုံခဲ့သမြှ ဂငျြးတှရေော အစဈအမှနျတှကေိုရော မြှဝပွေီးသှားပါပွီ။ ရောကျအောငျသှားပွီး ဂငျြးကွညျ့ရှောငျဖို့ကတော့ ယောငျးတို့တာဝနျဖွဈသှားပွီနျော။ ကဲ ဘာလုပျနတောလဲ ဝယျထားသမြှ အနှေးထညျတှနေဲ့ ပနျးပေါငျးစုံကွားမှာ ရှိုးထုတျဖို့ မွနျမွနျစီစဉျလိုကျတော့လေ။
ဓာတျပုံမြား အသုံးပွုခှငျ့ပေးပါသော Ko Tin Maung အား အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
Tagged flower, go, Pyin Oo Lwin, review, tips, travel, Visit, Winter
Posted on April 24, 2019 Author Phyu Thant
Posted on April 30, 2019 April 30, 2019 Author Aye Mon Kyaw
တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မကုန်လိုက်ရဘဲ တခမ်းတနားသွားခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်ခရီးစဉ် အပိုင်း -၂ လာပါပြီရှင်..
ဘဝအတွက် ခွန်အားတွေ ပြည့်လာစေဖို့ ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၃)အုပ်
Posted on November 23, 2018 January 3, 2019 Author Windy
ဝင်ဒီ ညွှန်းပေးတဲ့ စာအုပ်ဆိုရင် ဖတ်သာဖတ်ကြည့်၊ ဖတ်လိုက်လို့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေအတွက် မနှမြောစေရဘူးလို့ အာမခံတယ်